Serivisy mpiady - Shenzhen PUAS Industrial Co., Ltd.
Ny vokatra rehetra avy amin'ny PUAS miaraka amin'ny warranty telo taona.
Ny vokatra rehetra miaraka amin'ny olana momba ny kalitao ,, dia hitarika mivantana izahay hanome vokatra vaovao hisolo ao anatin'ny telo volana.
Ny RMA fotsiny dia omena faritra maimaim-poana ho an'ny serivisy fitandremana mihoatra ny 3 volana.
Alll of the date dia nitan'i S / N
1.Ny vokatra nandritra ny vanim-potoana fiantohana, ny lesoka mitovy amin'izany dia mitranga ao anatin'ny 3 volana fikarakarana karama, ary hamboarina maimaimpoana.
2.Duo hanery ny majure antony (toy ny ady, horohoron-tany, tselatra sns) na fampiasana tsy mety, lesoka amin'ny fametrahana ary fandidiana tsy ara-dalàna hafa na kisendrasendra tampoka dia tsy saron'ny fiantohana maimaimpoana.
3.Ny vokatra rehetra dia tsy maintsy manangona fonosana fisarahana sy entana fitaterana entana tany am-boalohany. Raha ampiasao ny fahasimban'ny fonosana amin'ny ankapobeny vokarin'ny karazana vokatra na tsy nampiasa ny fitaterana fonosana tany am-boalohany, dia tsy an'ny haben'ny fiantohana maimaimpoana izany.
4.Mandrara ny mpampiasa raha tsy mahazo alalana handrava ilay masinina, ilay mpampiasa hanala ireo vokatra namboarina, dia tsy ao anatin'ny faritry ny fiantohana maimaimpoana. Ho an'ireo vokatra diso nandritra ny vanim-potoana fiantohana, ny orinasa dia nametraka serivisy fikojakojana voaloa mandritra ny androm-piainany.
5.Ho an'ny fatiantoka ny vokatra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny warranty, fenoy azafady mba fenoy tsara ny endrika fampahalalana. Lazalazao amin'ny an-tsipiriany ny tsy fahampiana. Ary omeo faktiora amin'ny varotra tany am-boalohany na ny kopiny.
6.Ny fahasimbana sy fatiantoka nateraky ny fampiharana manokana an'ny mpampiasa. Tsy hitondra risika ny orinasa aryandraikitra. Ny fanonerana ny orinasa vita tamin'ny fandikana ny finoana. Ny tsy firaharahiana na fampijaliana dia tsy hihoatra ny vola
amin'ny vokatra. Ny orinasa dia tsy handray andraikitra amin'ny manokana, tsy ampoizina ary manohy ny fanimbana entin'ny hafa.
7.Ny orinasantsika dia manan-jo hanazava farany an'ireo teny voalaza etsy ambony.
1.Ny mpividy dia mila mandefa ny vokatra tsy mandeha amin'ny adiresy voalaza ao miaraka amin'ny fampahalalana momba ny karatra fiantohana.
Vidin'ny fandefasana RMA na nosoloana.
2.Ny orinasa irery dia mandefa vidin'ny fandefasana vola amin'ny mpanamboatra ho an'ny mpaninjara ny mpividy Channel na mpividy.
Ny rehetra an'ny mpampiasa farany dia miverina any amin'ny orinasanay, azafady mba hifandraisanao amin'ny varotra mialoha kokoa.